China mveliso kunye namacandelo SJJ
Ipatch eyenziwe ngokwezifiso, ii-insignia okanye ii-epaulettes zilungele ezomkhosi, i-Boy Scout, umnqwazi, isikhafu kunye nayo yonke iyunifomu. Kananjalo singenza ii-patches ze-3D kunye ne-chenille patches.
Ukuhonjiswa bubugcisa bembali ende, sele kuyiminyaka engamawaka amathathu yavela ukuza kuthi ga ngoku, ukusuka kwinto yokuqala eyenziwe ngobunewunewu ukuya kuthi ga ngoku kumatshini ozenzelayo owenziwe ngobugcisa. Imfuno yokuhombisa ikonyusa imihla ngemihla, ngakumbi iindawo zemihombiso isetyenziswa ngokubanzi kwezomkhosi, isebe lomlilo lamapolisa, inkonzo yezokhuseleko, isebe likarhulumente, iklabhu yezemidlalo kunye neqela, iiyunifomu ezisemthethweni zabameli, iscout neckerchief, nayo ingabekwa kwiminqwazi kwaye iingxowa.
Inkqubo yethu yokuhombisa yavela eTaiwan ukusukela ngo-1984, imithungo iqine kakhulu, kwaye umda wokugqibela wentambo unamathele ngasemva uqinile. Sinamagcisa kunye namagcisa anamava apheleleyo, sinokwenza imveliso yobugcisa ngokoyilo lwakho. Fumana esona sisombululo sisiso ukufezekisa uyilo lwakho ngaphakathi kweeyure ezingama-24. Ke khetha thina, kulula kwaye ngokukhawuleza ufumane uyilo lwakho. Kwaye umzi-mveliso wethu wase-Dongguan unee-58 zoomatshini abaphambili, umatshini omnye unokufumana ii-20-30pcs ezifanayo ii-patches ze-logo ezifanayo. Olu sebenzi oluphezulu lunokusinceda ukuba sinikeze abathengi bethu abathengi ngamaxabiso aphantsi amaxabiso okuhombisa. Ukuya kuthi ga kwimibala eli-12 kwibala elinye, imibala eyahlukeneyo yokwenza uyilo lwakho lubonakale.
Singumbonisi ovunyiweyo weDisney, umzi-mveliso ovunyiweyo waseUnited States, umkhosi waseJapan, umkhosi owamkelekileyo womoya okhuselweyo, kwaye sisebenzisana neenkampani ezininzi ezaziwayo zempahla. Ngokuqinisekileyo uya kwaneliswa ngumgangatho wethu. Nceda ungathandabuzi ukunxibelelana nathi kwaye ufumane ii-patches zakho ezenziwe ngesiko.
** Umsonto: Imisonto yemibala engama-252 / imisonto ekhethekileyo yegolide yesinyithi kunye nesilivere yesinyithi / umbala oguqula intambo ebuthathaka ye-UV / ukuvutha kumsonto omnyama
Imvelaphi: twill / velvet / felt / silk okanye ilaphu elikhethekileyo
Ukuxhaswa: Intsimbi, iphepha, iplastiki, iVelcro, ukunamathela
** Uyilo: imilo ebunjiweyo kunye noyilo
** Umda: umda wokungqengqeleka / umda wokusika we-laser / ukusika ubushushu / ukusika umda
** Ubukhulu: wena
Ukuhanjiswa: Iintsuku ezingama-3-4 zesampulu, iintsuku ezili-10 zokuvelisa ubuninzi
Egqithileyo Iingqekembe Zomkhosi
Okulandelayo: Imisonto ephothiweyo yenkcubeko - ngokuhamba ngokungxama okanye abalinganiswa abangenanto
I-China Badge Patch kunye nexabiso leBheji elihonjisiweyo
I-China yeyona nto iFunny Scout Patches
I-China yeyona nto iQhelekileyo yokuKhangela amaKhwenkwe
KwiChina Abadayisi abaPhezulu abaPhezulu abaBoneleli
Iziqwengana ezenziwe ngokwezifiso
IiPatches ezenziwe ngeSiko eziNcinci akukhoNcinci
Isiko lokulungisa iimpahla
Ukuyila iiPatches ezimfakamfele
Iimpawu eziLukiweyo zeLogo
Iipatches ezimiselweyo ziyathengiswa